Home Wararka Shiikh Sharif “Aniga Kenya ayaa i wadata, lacagtii u horeeysayna waa la...
Shiikh Sharif “Aniga Kenya ayaa i wadata, lacagtii u horeeysayna waa la ii soo shubtay”
Shiikh Sharif oo kamida Musharaxiinta u tartamaya jagada madaxweynaha dalka Soomaaliya aya isaga oo xalay qadka taleefanka kula hadlaya qaar kamida taageerayaashiisa waxa uu u sheegay in ayan haynin lacag la’aan, dhawaana lacag loo soo shubi doono, qaybtii horana loo soo shubay.
Hadalka Shiikh Sharif ayaa ku soo aadaya iyada oo waayahan danbe la isla dhexmarayay warar sheegaya in Shiikh Sharif ay la soo daristay dhaqaale xumi keentay in uu taageero waydiisto Farmaajo iyo Fahad.
Sharif ayaa yiri “Aniga Kenya ayaa i taageeraysa, lacagtii u horeeysana waa la ii soo shubay, oo koontada ayaa la iigu soo shubay”
Waxa uu taas raaciyay “ Kenya iyo aniga waxa na dhexmaray isfaham buuxa kaas oo suuragaliyay in aan wax badan isla meel dhigno, oo ay ku jirto dhaqaale siin”.
Mid kamida dadkii ka qaybgalay kulankaas oo la hadlay MOL ayaa sheegay in Shiikh Sharif uu ku adkeeyay dadkii uu la hadlay in ay xogtaan aan cidna lala wadaagin.
Hadalka ka soo yeeray Shiikh sharif ayaa u Muuqda mid uu doonayo in uu ku rajo galiyo saaxibadiisa oo u muuqda kuwa aan rajo badan ka qabin in dib loo soo dooran doono Shiikh Sharif.
Dhanka kale hadalka Shiikh sharif, waaba hadii ay run yahay, waxa ay cadayn adag u tahay in dowlada Kenya rajo kaga jirto in ay sii kala fogeeyso shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan Xiligaan kala guur ah.
Musharaxiinta ku tartamaysa kursiga madaxweynaha ayaa ku kala tartamaya in ay dhaqaale ka helaan wadamo shisheeye si ay ugu iibsadaan Xildhibaanada dooran doona madaxweynaha. Inta badan Musharaxiintaas ayaa faafiya warar been abuur ah oo la doonayo in lagu kasbado Xidlhibaanada Mustaqbalka la dooran doono.
Shiikh Sharif ayaa lagu eedeeyaa in uu qayb ka ahaa dadkii mas’uulka ka ahaa in bada Soomaaliyeed la galiyo muran keenay in Maxkamad lala aado badii Soomaaliya.
Dowladii Madaxweyne Xasan Shiikh ayaa ku da’daashay in dib loo soo celiyo badda Soomaaliyeed ka dib markii ay dowladiisa ay dalka Kenya ay la tiigsatay maxkamad Caalami ah.
Previous articleDowladda Federalka oo war kasoo saartay ciidamada la geeyey Eritrea
Next article(Daawo) Qaar ka mid ah dhalinyaradii aay DF u qaaday Eriteriya oo ka soo baxsaday oo hadlay.
Horjooge katirsan Alshabaab oo iskusoo dhiibay Koonfur Galbeed
Qarax weyn oo laga maqlay Magaalada Muqdisho iyo Faahfaahinta laga helay